Ha Balweeyo ee daa : Waxa Qoray Cumar Seerbiya | Berberatoday.com
Ha Balweeyo ee daa : Waxa Qoray Cumar Seerbiya
Haddaan kuu daacad waramo wali ma arkin muuqaal noocan ah adigana uma malaynayo inaad aragtay waa haddii aad jeceshay inaan is aamino, mana filaayo inay wali hal meel ku wada kulmeen intan oo arrimood oo uu ugu horeeyo koobka shaaha caleentu ku yartahay ee Bigayska ah /aan caanaha lahayn ee dul saaran miiska yar ee cadceeda galabnimo eek u dhacaysa aad moodayso in isaguba yahay godkii ay qoraxdu u hooyaynaysay .
Fadhi iima yaalo oo markiiba labadayda kabood oo mid lugtayda ka baxsanayd ayaan gashaday waxayna markiiba amar aanan garanaynin cid I siisay balse aan naftayda oo inta badan dirir naga dhaxayso aan u aanaynayo ayaa lagu yidhi kac oo adeeg , maxaan qabtaa ayaan weydiiyey nafta ?. miyaanad maqlaynin sawaxanka iyo shuuxa dhagaha ku soo dhacaaya ayey iigu jawaabtay waxayna sii raacisay haddaad maanta gacan I siinwaydo goormeen ku gar-gaarsan ?.
Waxyar haddii aanu sii dhexgalnay sheekadii iyaduna waxa noo soo baxday in heestani ku jirtay riwaayad la odhan jiray [sdhaafe dhallaanka iyo waalidkii dhalay] oo ay si wad ajir ah u alifeen Cabdilaahi Cabdi Shube iyo Axmed Saleebaan Bidde.
Sheekadan waxaan ka qoray nin galab fadhiyey maqaaxi shaah oo ku taalla magaalada Khartoum ee dalka Suudaan oo aan markii hore suudaani moodayey balse markii dambe soomaali noqday.